Chelsea Oo Isku Dayaysa Inay Xagaaga U Dhaqaaqdo Saxiixa Sergino Dest.
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo isku Dayaysa inay xagaaga u Dhaqaaqdo saxiixa Sergino Dest.
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay miisaamayso inay xagaaga u dhaqaaqdodaafaca midig ee Barcelona Sergino Dest .
Blues ayaan haatan awoodin in ay la soo wareegto xiddigo cusub dhibaato lahaanshaha haysata darteed, laakiin kooxda ayaa rajo ka qabta in mustaqbalka dhow la heli doono xal u ogolaanaya in ay suuqa xagaaga soo galaan.
Sida laga soo xigtay Sport , kooxda Thomas Tuchel ayaa xiiseyneysa inay Dest keento Stamford Bridge, iyadoo Barcelona ay u furan tahay inay iska iibiso inta lagu jiro suuqan xagaaga.
Warbixinta ayaa sheegtay in kooxda reer Catalan ay ku qiimeyso Dest in ka badan €20m (£17.1m), laakiin labada dhinac ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka wada xaajoodaan heshiis is dhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin labadaba Cesar Azpilicueta iyo Marcos Alonso .
Chelsea ayaa u baahan doonta inay dib u habeyn ku sameyso daafaceeda xagaagan, maadaama labada Antonio Rudiger iyo Andreas Christensen ay ku baxayaan beeca xorta ah, iyadoo midka dambe uu ku biirayo Barcelona, ​​halka Azpilicueta iyo Alonso la rumeysan yahay inay riixayaan inay baxaan ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.
Dest ayaa Barcelona kaga soo biiray Ajax sanadkii 2020, waxaana uu kooxda La Liga u matalay 72 jeer tartamada oo dhan, isagoo ka qayb qaatay seddex gool iyo afar caawin.
Xiliciyaareed kan, xiddiga heerka caalami ee dalka Mareykanka ayaa 31 kulan u saftay kooxda Xavi , isagoo ka qeyb qaatay seddex caawin, laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku seego ololaha inta ka dhiman dhibaato muruqa ah.
Dani Alves ayaa la filayaa inuu heshiis cusub oo hal sano ah u saxiixo Camp Nou, halka Sergio Roberto ay sidoo kale u badan tahay inuu qandaraaska u kordhiyo xilli ciyaareed kale, taasoo ku adkeyn doonta Dest inuu si joogta ah ugu soo bilowdo daafaca midig.
Si kastaba ha ahaatee, warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in Xavi uu aad u doonayay inuu sii haysto xiddiga reer Mareykan, isagoo la dhacay qaab ciyaareedkiisa qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka 2021-22.
Dest ayaa soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa isaga oo ka ciyaara daafaca bidix iyo weerarka midig xilli ciyaareedkan, inkasta oo markii hore loo adeegsaday daafaca midig tan iyo markii uu Xavi yimid tababaraha kooxda.